Iparadesi yabakhenkethi eIndonesia iBali ingena kulwakhiwo olungxamisekileyo olungxamisekileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo » Iparadesi yabakhenkethi eIndonesia iBali ingena kulwakhiwo olungxamisekileyo olungxamisekileyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndonesia eziQhekezayo • iindaba • Resorts • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 3, 2021
I-Indonesia ngoku ijongene nolunye uqhushululu lwe-coronavirus e-Asia, ilinganisa ngaphezulu kwe-20,000 yamatyala suku ngalunye kwiiveki ezidlulileyo.
UMongameli Joko Widodo uxele ukuvalwa ngokutsha kwangoko ngolwesiHlanu, emiselwe ukuba ihlale ngasekupheleni kukaJulayi, nangona inokwandiswa.
Umdibaniselwano kulindeleke ukuba uqinisekise ukuba ukuvala umsebenzi kuya kuqhuba ngokufanelekileyo kwaye kufezekise usukelo.
Umdibaniso unamapolisa angama-21,000 namajoni angama-32,000.
Ngokwamagosa asebupoliseni, urhulumente wase-Indonesia uthumela amagosa angama-53,000 kwizithintelo ezingxamisekileyo zomsebenzi woluntu (apha ekuthiwa yi-PPKM) owamiselwa eJava naseBali ukusukela nge-3 ukuya kwi-20 kaJulayi.
Umhloli Jikelele u-Imam Sugianto uthe umkhosi odibeneyo unamapolisa angama-21,000 kunye namajoni angama-32,000.
Umdibaniselwano kulindeleke ukuba uqinisekise ukuba i-PPKM yexesha likaxakeka iza kusebenza ngokufanelekileyo kwaye ihlangane nokujolise kuko, wongeze watsho uSugianto.
Amakhulu eendlela kunye neendawo ekuhlolwa kuzo ziye zamiswa kwiIndonesia yonke njengoko abasemagunyeni bezama ukunyanzela ukuvalwa ngendlela engqingqwa ejolise ekupheliseni ukusasazeka kwe-COVID-19, ethe yanda elizweni kwezi veki zidlulileyo.
Eli nyathelo liza kwakamsinya emva kokuba uMongameli Joko Widodo ebhengeze ukuvalwa ngokutsha kwangoko ngolwesiHlanu, emiselwe ukuba ihlale ngasekupheleni kukaJulayi, nangona inokwandiswa. Umyalelo ufuna ukuba onke amashishini "angabalulekanga" avale iingcango zawo, ngelixa abafundi baseJava- naseBali kuya kufuneka bafunde ekhaya ukuba kunokwenzeka. Iipaki, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela ngaphakathi kunye neendawo zonqulo, phakathi kwezinye iindawo zikawonke-wonke, nazo zivaliwe.
I-Indonesia ngoku ijongene nolunye uqhushululu lwe-coronavirus e-Asia, ilinganisa ngaphezulu kwama-20,000 12 amatyala usuku ngalunye kwiiveki ezidlulileyo-uninzi lwazo lukholelwa ukuba ludibene nolwahlulo lwe-Delta olwaqala ukubonwa e-India -kwaye kuphela ziingxelo zabo baqinisekisiweyo ngovavanyo. Ilizwe liyichithile irekhodi losulelo lwemihla ngemihla kwiintsuku ezili-25,830 ezidlulileyo, ngokweReuters, inika ingxelo ngamatyala angama-539 ngolwesiHlanu, kunye nokufa kwabantu abangama-XNUMX.
Kunikwe BaliUkuthandwa kwabakhenkethi kunye nenqanaba labo njengendawo yoqoqosho, iinzame zogonyo zijolise kakhulu kwesi siqithi, apho malunga neepesenti ezingama-71 zabahlali begonyiwe ukuza kuthi ga ngoku. Phakathi kwesiphelo esandula ukwenzeka kumatyala - ukubona malunga ne-200 ngosuku-esi siqithi sihlala sivaliwe kukhenketho lwamazwe aphesheya, kubandakanya nababonayo abagonyiweyo, kuvumela kuphela abemi baseIndonesia kunye nabo baneemvume ezizodwa zokuya apho. Iqhayisa ngabantu abamalunga ne-4.3 yezigidi.